လက်ဖက်ရည်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့အတူ မနက်စာစုံစုံလင်လင်လေးတွေသုံးဆောင်နိုင်မယ့် ရွှေရိုး…. – FoodiesNavi
လက်ဖက်ရည်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့အတူ မနက်စာစုံစုံလင်လင်လေးတွေသုံးဆောင်နိုင်မယ့် ရွှေရိုး….
By yin sandi On April 11, 2018 0
တစ်ညတာလုံးအိပ်စက်နေရာမှ နိုးထလာမယ့်မနက်ခင်းအချိန်အခါလေးမှာ အရသာရှိတဲ့မနက်စာလေးတွေကို စားသုံးပြီးတစ်နေ့တာလုံးအတွက် အားအင်ဖြည့်တင်းချင်တဲ့သူတွေအတွက် စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝပေးနိုင်မယ့် မနက်စာလေးတွေရရှိနိုင်မယ့် ရွှေရိုး Tea House အကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
မန္တလေးအငွေ့အသက်တွေကို တမ်းတလွမ်းဆွတ်သွားစေမယ့် မန္တလေးမြီးရှည် ၊ ဆီသန့်သန့်အသားများများလေးနဲ့ သုပ်ထားတဲ့ နန်းကြီးသုပ်/နန်းပြားသုပ် ၊ စီစီးပိုင်ပိုင်နဲ့ဆိမ့်ဆိမ့်လေးသုံးဆောင်ရမယ့် သုံးမျိုးစပ်ကောက်ညင်းပေါင်းအကြော်စုံ ၊ ပလာတာသားနူးအိအိလေးတွေကို ဆိတ်သားဟင်းမွှေးမွှေးလေးနဲ့သုံးဆောင်ရမယ့် ဆိတ်စွပ်ပလာတာ ၊ ဓလေ့ထုံးစံမပြတ် သုံးဆောင်လေ့ရှိတဲ့ ပဲပြုတ်ထမင်းဆီဆမ်း ၊ အသားအရသာအဆီအနှစ်တွေ ဆန်လုံးလေးတွေထဲထိစိမ့်ဝင်နေအောင် ကြော်ထားတဲ့ ပုဇွန်ဆီထမင်းကြော် ၊ ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်ငါးများများလေးနဲ့ချက်ထားပြီး အိုးဘဲဥ အကြော်စုံတွေနဲ့ရှယ်တွဲဖက်စားလို့ကောင်းတဲ့ မုန့်ဟင်းခါး ၊ ကြက်သားရောဝက်နံရိုးနဲ့ပါရနိုင်ပြီး လူကြိုက်များလှတဲ့ ပဲခေါက်ဆွဲစတဲ့ရှယ်မနက်စာတွေကို အရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ခင်းအချိန်လေးမှာ လက်ဖက်ရည်ဆိမ့်ဆိမ့်လေးသောက်ရမှ ပြီးပြည့်စုံနိုင်တဲ့ လက်ဖက်ရည်ကြိုက်သူတွေအတွက်လည်း ကိုယ်တိုင်ဖျော်တဲ့ ရှယ်လက်ဖက်ရည်အရသာကို တစိမ့်စိမ့်ခံစားရရှိနိုင်တမယ့်အပြင် Black Coffee ကိုမှရင်ခုန်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း သူမတူတဲ့ခါးသက်သက်အရသာလေးတွေ ပေးစွမ်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပဲဆီစစ်စစ်ကိုသာအသုံးပြုပြီး အချိုမှုန့်မထည့်ဘဲချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးတာကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း စိတ်ချယုံကြည်ရတယ်နော်။ ရွှေရိုး Tea House ရဲ့လိပ်စာတော့ အမှတ်(၁၈၁) ၊ အနော်ရထာလမ်း ၊ ရွှေတောင်တန်းလမ်းနှင့်(၁၄)လမ်းကြား ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ စံပြရုပ်ရှင်ရုံနဲ့လည်းနီးတယ်ဆိုတော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးဗိုက်ဆာလာတဲ့အချိန် သွားစားရင်လုံးဝရှယ်ပဲနော်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ မနက်(၆)နာရီကနေ ည(၁၀)နာရီထိပဲဖြစ်ပါတယ်။
Image Source: www.facebook.com/shweyoeteahouse
ဆိမ့်ဆိမ့်အိအိလေးနဲ့ အရသာတွေ့သွားစေမယ့် အာလူးပဲပင်ပေါက်သုပ်နည်း
အိအိဆိမ့်ဆိမ့်အရသာပေးစွမ်းပြီး ကလေးလူကြီးမရွေးကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အာလူးကတ်သလိတ်ပြုလုပ်နည်း